Petro Nhoma a Edi Kan 3:1-22
Ɔyerenom ne okununom (1-7)
Munnya tema; monhwehwɛ asomdwoe (8-12)
Sɛ trenee nti muhu amane a, eye (13-22)
Munsiesie mo ho sɛ mobɛkyerɛkyerɛ mo anidaso mu (15)
Asubɔ ma yenya ahonim pa (21)
3 Saa ara na mo ɔyerenom nso, mommrɛ mo ho ase mma mo kununom.+ Sɛ moyɛ saa na moankasa mpo a, monam mo abrabɔ so benya mo kununom a wɔnyɛ aso mma asɛm no,+ 2 efisɛ wɔn ankasa de wɔn ani behu mo abrabɔ pa+ ne obu a emu dɔ no. 3 Mommma mo ahoɔfɛ nnnyina ahosiesie a nnipa hu so; ɛnyɛ nea ehia ne sɛ obi bɛbɔ ne ti, ɔbɛhyɛ sika kɔkɔɔ agude,+ anaa ɔbɛhyɛ ntaade a ne bo yɛ den; 4 mmom momma ennyina nneɛma a ɛnsɛe so, kyerɛ sɛ, komam nipa a ahintaw, honhom a edwo na ɛbrɛ ne ho ase;+ eyi na ɛsom bo Onyankopɔn anim. 5 Saa ara na tete no, mmea kronkron a wɔde wɔn ho too Onyankopɔn so no siesiee wɔn ho, na wɔbrɛɛ wɔn ho ase maa wɔn kununom; 6 Sara yɛɛ saa, na otiee Abraham frɛɛ no me wura.+ Sɛ mokɔ so yɛ papa na moammɔ hu a,+ ɛnde na moabɛyɛ Sara mma. 7 Okununom, saa ara na ɛsɛ sɛ mokɔ so ne wɔn tena wɔ nimdeɛ mu.* Munni mmea no ni+ sɛ anwenne a ɛyɛ mmerɛw sen mo, na mo mpaebɔ kwan ansiw, efisɛ nkwa a wɔde adom mo no, wɔn nso anya bi.+ 8 Afei mo nyinaa nyɛ adwenkoro,+ na munnya tema, onuadɔ, ayamhyehye,+ ne ahobrɛase.+ 9 Mommfa bɔne nntua bɔne so ka,+ na mommfa adapaatwa nntua adapaatwa so ka.+ Mmom munhyira nkurɔfo+ na mo nsa aka nhyira, efisɛ eyi ne asetena a wɔfrɛɛ mo baa mu. 10 Na “nea ɔdɔ nkwa na ɔpɛ sɛ n’ani gye wɔ asetenam* no, ma ɔnhwɛ ne tɛkrɛma yiye na anka asɛmmɔne,+ na ɔnhwɛ n’ano yiye na anka nnaadaasɛm. 11 Ma ɔntwe ne ho mfi bɔne ho+ na ɔnyɛ papa;+ ɔnhwehwɛ asomdwoe na onni akyi.+ 12 Yehowa* ani wɔ atreneefo so, na wayɛ aso ama wɔn nkotosrɛ;+ wɔn a wɔyɛ bɔne no de, Yehowa* ani sa wɔn.”+ 13 Na sɛ mobɔ papayɛ ho mmɔden a, hena na ɔbɛhaw mo?+ 14 Na sɛ trenee nti muhu amane mpo a, mowɔ anigye.+ Nanso nneɛma a ehunahuna wɔn no,* munnsuro, na mommma ɛmmɔ mo hu.+ 15 Mmom no, mummu Kristo wɔ mo komam sɛ ɔyɛ kronkron na ɔno ne Awurade. Munsiesie mo ho sɛ bere biara a obi bebisa anidaso a mowɔ no ho biribi no, mubeyi no ano, nanso monyɛ no odwo+ ne nidi*+ mu. 16 Munkura ahonim* pa mu+ sɛnea ɛbɛyɛ a asɛmmɔne biara a nkurɔfo bɛka afa mo ho no, ɔbra pa a mobɔ de kyerɛ sɛ moyɛ Kristofo+ no bɛma wɔn ani awu.+ 17 Na sɛ muhu amane adepa ho, na Onyankopɔn ma kwan saa a, eye+ sen sɛ mobɛyɛ bɔne ahu amane.+ 18 Bɔne nti Kristo wui prɛko;+ ɔtreneeni wu maa abɔnefo+ na ɔde mo akɔ Onyankopɔn nkyɛn.+ Wokum no ɔhonam mu+ nanso wɔma ɔtenaa ase honhom mu.+ 19 Tebea yi mu na na ɔwɔ a ɔkɔkaa asɛm kyerɛɛ ahonhom a wɔwɔ afiase+ no. 20 Wɔn na Noa bere so no,+ wɔyɛɛ asoɔden bere a Onyankopɔn nyaa abotare twɛnee* no. Saa bere no na wɔyɛɛ adaka+ de koraa nnipa kakra so, kyerɛ sɛ, akra* baawɔtwe, na wɔde wɔn twaa nsuyiri no.+ 21 Nea ɛte sɛ eyi ne asubɔ, na seesei ɛnam Yesu Kristo wusɔre so gye mo nkwa; ɛnyɛ sɛ eyi yɛn honam ho fĩ, na mmom ɛyɛ adesrɛ a yɛde to Onyankopɔn anim de bisa ahonim pa.+ 22 Ɔkɔɔ soro, na ɔwɔ Onyankopɔn nsa nifa;+ na wɔde abɔfo ne atumfo ne ahoɔdenfo ahyɛ n’ase.+
^ Anaa “mokɔ so te wɔn ase.”
^ Nt., “ɔpɛ sɛ ohu nna pa.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wɔn ahunahuna no.”
^ Anaa “obu kɛse.”
^ Nt., “bere a Onyankopɔn abotare twɛnee.”